ကောင်းကင်ဖြူ: May 2012
Posted by မောင်ဘုန်း at 5:14 AM4comments
နှင်းခ သစ္စာ ထပ်တူပြုလည်း
ဗျာပါ မီးက ထပ်ထပ်ပိုတယ်
စိတ်ပွေ လို့ဆင့်ကဲ
ယင်နာ တဲ့ ပင့်ကူ အိမ် လို
တစ်ငွေ့ ငွေ့လောင်လို့ 
ဖြစ်ရတဲ့ သည် စိတ်
မေတ္တေန …… မေတ္တာ
သစ္စေန ………. သစ္စာ
အခါခါ ရွတ်ဆို ဟန်မှုမထိန်း
ငယ်မှု အတွေး ပြုလိုက်ပုံ က …… ။
ရော့ ….. အကြွေစေ့ ….
ခေါင်းပန်းလှန် မယ် …..
ပန်းဖြစ်နိုင်ချေ တစ်ခုနဲ့ 
ခေါင်းဖြစ်နိုင်ချေ တစ်ခု ....
ကျန်တာ မင်း အကုန် ယူ ကွာ …. ။
အဲ့လို မကြည့် ပါနဲ့….
ကျနော် ကို အတ္တလေး နည်းနည်းလောက် ပေးပါဗျာ ….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:56 AM 12 comments